Maitiro ekubvisa nzvimbo data kubva kumafoto atinogovana | Ndinobva mac
Nezuro chaiye ndakakuratidza kunyorera kwakatibvumidza kuti tiwedzere zvachose, kugadzirisa kana kudzima marongero eGPS ayo anosanganisirwa nekutadza nguva dzese patinotora pikicha kana vhidhiyo. Ichi chinhu chinogona kubatsira zvakanyanya kune vanhu vazhinji, kunyanya kune kukwanisa kurongedza nekukurumidza uye kuona ese mafoto nenzvimbo.
Asi kana zvasvika pakugovera iwo mafoto zvingangoita izvo hatidi kugovana chaizvo kwavakaitirwa. Munyika yekutora mifananidzo, kunyanya pakati pevashandi, nzvimbo dzekutora mifananidzo chinhu chakakosha kwazvo uye kuyedza kudzivirira nenzira dzese kuti ruzivo urwu rwunozivikanwa.
Kana tichida kubvisa ruzivo urwu, zvingangoita kuti chikonzero chakafanana kana chakafanana. Kana iwe uchigara uchishandisa iyo Photos application kuchengeta uye kugovera ako aunofarira mafoto, pamusoro pekugovana iwo, pamwe haudi kugovera chaiko nzvimbo kwavakatorwa. Kuti ubvise iyi data, unogona shandisa yechitatu-bato kunyorera kunowanikwa paMac App Store, kana iwe unogona kuenda rimwe nerimwe uchibvisa ruzivo urwu, asi ihurefu uye hunonetesa maitiro.
Neraki, iyo macOS Mifananidzo application inotipa mukana wekugovana edu emafoto mafoto kuburikidza nekushandisa kubvisa iyo data ine hukama nenzvimbo yakafanana, kuitira kudzivirira vamwe vanhu kuti vasvike kunzvimbo yedu yatinofarira. Kuti tidzivirire iyo nzvimbo yedhata yemifananidzo yedu kubva kugoverwa, isu tinofanirwa kuenda kuApplication application uye tinyore izvo zvaunofarira zvekushandisa.
Pakati pezvaunofarira zvekushandisa, tichawana maviri tabo: General uye iCloud. Tinonanga kuGeneral. Iye zvino isu tinotsvaga iyo Metadata sarudzo uye uncheck iro bhokisi "Sanganisira ruzivo renzvimbo muzvinhu zvakabudiswa." Nenzira iyi, pese patinogovana mifananidzo yedu kuburikidza nekushandisa, iyo data ine hukama nenzvimbo yaro inozobviswa otomatiki kubva kumifananidzo iri kugoverwa, kwete kubva kumifananidzo yatakachengeta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekubvisa nzvimbo data kubva kumafoto atinogovana
Maitiro ekuvanza izvo zvidhori pane yepamusoro menyu bhawa pane yedu Mac
USB 3.2 ndiyo nyowani nyowani ye USB C pamwe nekuchinjiswa kunosvika 20Gbps